Margarekha » राप्तीसोनारी ८ मा राहतको दायरा बढाइयो : वडा अध्यक्ष बस्नेत
एस.एम. वि.बाँके २०७७ जेष्ठ ६ मंगलबार /
कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन भएको ५७ औँ दिन पुगिसकेको छ । देशका विभिन्न स्थानिय तह, विभिन्न संघसंस्था, व्यत्तिगत तबरबाट पनी राहत वितरण कार्य निरन्तर जारी छ । लकडाउन लम्बिदै जाँदा ज्यालादारी गरिब तथा असाय परिवारहरुको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । लकडाउनका कारण दिनहुँ महंगी पनी उतिकै बढिरहेको छ । श्रोत साधन जुटाउनका लागी आम मानिसहरुलाई निकै कष्टकर भइरहेको छ । कतिपय आम मानिसहरु एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ जानका लागी बिचल्लीत भइरहेका छन् ।
लकडाउन लम्बिए पछि राप्तीसोनारी गाँउपालिकाले पुन राहत वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । वडा नं. ८ मा रहेका विपन्न तथा अति विपन्न वर्गका परिवारलाई राहतको दायरा बढाई वितरण गरिएको राप्तीसोनारी वडा नं.८ का वडा अध्यक्ष खुम बहादुर बस्नेतले बताए । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार अति विपन्न वर्गमा रहेका २ सय बढी परिवारलाई घर परिवारको संख्या हेरेर १२ केजी देखी १६ केजी चामल , दाल , नुनु, तेल सामाजिक दुरी कायम गरी वितरण गरिएको छ । उक्त राहत वितरणमा अमुवा,ओभरी, डाँडागाँउ,खल्ला गाँउ, पेरानी, धर्मोती, बालापुरमा रहेका विपन्न परिवारहरुले राहत वितरण गरिएको वडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउन भइसकेपछी करिब ८ लाख रकम राहत प्याकेजमै खर्च भइरहेको वडा अध्यक्ष बस्नेत बताउछन् ।
वडा अध्यक्षको पहलमा मजदुरहरुको उद्धार
कामको शिलसिलमा रुपन्देही पुगेका बाँके राप्तीसोनारी ८ बालपुरका ३ युवाहरुलाई राप्तीसोनारी ८ ले उद्धार गरेको छ ।
लामो समय लकडाउनका कारण मजदुरी गर्न गएका ती युवाहरु अलपत्र परेपछी उद्धारका लागि वडा कार्यालयले तिलोतमा नगरपालिका रुपन्देही संग समन्वय गरी सोमबार ती युवाहरुलाई उद्धार गरी शिवशक्ती माध्यामिक विद्यालय पेरानीमा निर्माण भएको क्वारेन्टाइमा राखिएको छ । उता राप्तीसोनारीका गाँउपालिका वडा नं. ८ का ३० जना मजदुरहरु रुपैडिया नाकामा अलपत्र परेका छन् ।
उनीहरुको उद्धारका लागि गाँउपालिका र वडा कार्यालयले बारम्बार प्रशासन संग उद्धार गरिदिन पहल गरेतापनी अहिले सम्म कुनै सुनुवाई नभएको वडा अध्यक्ष बस्नेत बताउछन् ।रुपैडिया नाकामा अलपत्र परेका ती मजदुरहरु उद्धारका लागि गाँउपालिका र वडा कार्यालयको टिम पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपैडिया नाका धाउदै आएको छ ।